“အတွေးစလေးတွေ”: အခွင့်ပန် . . .
Posted by Han Kyi at 2:05:00 pm
I really like this post. U have sense of humor & quality of writing. Why don't u write the satire?
ဆြာရေ့ ကျောင်းတွေ ဖွင့်တော့မယ်နော့် ဒီတစ်ခေါက် ဟိုဘက်ကမ်း ကူးဖြစ်ရင်ဆော့ ဆြာ့ဆီ လာလည်အုံးမယ်ဗျး) ။
ဘလော့ပိုးက သတ်ရခက်တယ် အဟုတ် ။
ဆရာကိုဟန်ကြည်ရေ ဆရာ့စာဖတ်ရတာ ကမ္ဘာအေးသာသနာ့တက္ကသိုလ်တုန်းက ကျက်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာစာကို သွားသတိရမိတယ်။ ရေးတတ်ပါပေသတတ်။ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်မိပါသတည်း။
အင်တာနက်ကို ငွေနဲ့ဆက်ပြီး သုံးနေရတာတော့ သိပ်မကိုက်လှဘူး။
ဒီမှာတော့ တလစာပေးထားရင် တလလုံးမနားတမ်း သုံးရတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ် ပြောရမယ်။
စကားမစပ်.... ကျနော်တို့ရဲ့ မန်ယူ ၁၉ကြိမ်မြောက် စံချိန်တင်ချန်ပီယံဖြစ်ပါပြီ။
cheer !!! မန်ယူဖန် ....။
14 May 2011 at 08:20
ပြည်တွင်းမှာတော့ ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီပေါ့ ကိုမြစ်ရေ...ဘာစီနဲ့ကန်မယ့်ပွဲကိုပဲ အခုတော့ ကြိုရင်ခုန်နေမိတယ်ဗျ...
အကယ်၍များ ကျွန်တော့်ရှိရာကိုလာခဲ့ရင် ထုံးအိုးထမ်းခဲ့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
15 May 2011 at 10:21